About Us - Ningbo Wegro Abantwana Products Co., Ltd
Baby isihlalo imoto Gr0 + 1 + 2 + 3 (0-36kg)
Iqela labantu ezifana-nye wayezazi kakuhle kuyilo nobunjineli esihlalweni car umntwana sele eza phambili kunye umbono omnye ukugcina abantwana bekhuselekile kuhambo ngemoto.
Nanini ingqiqo entsha Waphuma, phambi kokuba loo nto, siya kwenza lukhulu yophando, uphando, kunye iimvavanyo yokukhubazeka zovavanyo ukungqina ingqiqo yeyona ekhuselekileyo. Ke iqela liya ucacise isicombululo kuyilo ukuba baqonde isigama ibe imveliso phantsi migangatho iphezulu ukhuseleko.
Xa imveliso samkelwe nezingqinekayo ukuba ekhuselekileyo, imveliso kunye supply chain zizinto ezingundoqo ukuze isihlalo ukhuseleko. E Wegro, sibe naso ulawulo kumthengisi & umgangatho engqongqo ukuqinisekisa isihlalo ngasinye siye ve ifikelela kwiimfuno zokuqala kuyilo.
Wegro izimisele ukuba ithembekile, uxanduva nangokuhloniphekileyo ukhuseleko umntwana izihlalo imoto supplier!
Abantu - Sithi "Amalungu eqela" hayi "abasebenzi". Sihlonipha nokuxhasa amalungu eqela lethu njengoko inzuzo encumisayo. Sizama ukutsala, ukuphuhlisa, bokufumana susumetela abantu zezona ngcali zinetalente singafumana, abantu inkathalo abasebenza kunye namaqabane.